Izindaba - Ezolimo zesikhathi esizayo-ukukhanyisa kwe-shineon horticulture
Ezolimo zesikhathi esizayo-ukukhanyisa kwe-shineon horticulture
Ngokusho kukaTechnavio, inkampani ecwaninga ngemakethe, imakethe yomhlaba yamalambu okukhulisa izitshalo izodlula u- $ 3 billion ngonyaka ka-2020 futhi izokhula ngezinga lokukhula ngonyaka eliyi-12% ngo-2020, okusho ukuthi izinhlelo ze-LED ekukhuleni kwezitshalo zinamakethe amakhulu kakhulu. Ngokushoda kwezinsizakusebenza zamandla kanye nokwehliswa komhlaba olimekayo, iqhaza kanye nesidingo samafektri ezitshalo sekugqame kakhulu - bangaqeda umhlaba futhi bakhiqize imikhiqizo yezolimo eningi ngomhlaba ongalimi kakhulu nemithombo yamanzi. Futhi ukukhanya kwe-horticulture kuyingxenye ebalulekile yayo, kusetshenziswa umanyolo omncane esikhundleni samanyolo wamakhemikhali, imithombo yokukhanya yokufakelwa isetshenziswa esikhundleni sokukhanya kwelanga.Lokhu kuyisihluthulelo sokuzuza ifektri yezitshalo enezithelo eziphezulu futhi engalondolozi imvelo.
Ukukhanya kwendabuko kwe-horticultural kutholakala ikakhulu kusetshenziswa amalambu we-sodium ephezulu, amalambu e-metal halide, kanye namalambu we-incandescent. Le mithombo ekhanyayo ikhethwa ngokuvumelana nokuguquguquka kweso lomuntu ekukhanyeni, futhi izitshalo zinezici zokumunca ezihluke ngokuphelele, okuholela ekutheni amandla amaningi emithombo yendabuko ayimosheke, futhi ukukhuthazwa kokukhula kwezitshalo akubonakali ngokwanele.
I-Chlorophyll absorption spectra Ijika lomuntu lokuzwela kwamehlo womuntu
I-Spectra yokukhuthaza ukukhula kwezitshalo igxile kakhulu ekukhanyeni okuluhlaza okwesibhakabhaka ku-450nm nokukhanya okubomvu ku-660nm. Izidingo zokulinganiswa kokukhanya okubomvu noluhlaza okwesibhakabhaka kwezitshalo ezahlukahlukene nezigaba zokukhula ezahlukene zezitshalo nazo zehlukile. Ngenxa yobukhulu bayo beplastikhi, ama-LED angakhiwa ngokuya ngohlobo oluthile lwezitshalo ezahlukahlukene.
Uchungechunge lokukhanyisa i-ShineOn horticulture seluthuthukise imikhiqizo ye-spectrum ebhekiswe ngokuya ngezinhlobo zezitshalo ezahlukahlukene.
Imikhiqizo ekhanyayo esebenza kahle ngokukhanya kwe-photon flux.
Iyavumelana nezicelo eziningi zokukhanyisa ukulima.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kulinganiswe izidingo zokukhula kwezitshalo ngamehlo abantu, i-ShineOn inikeza i-spectrum efanelekile yokutshala amakhaya amancane.
I-ANSI 3500K 7-step, i-Ra90, ingahlangabezana nezidingo zokukhanyisa zansuku zonke, ngasikhathi sinye, i-2.1umol / J photosynthetical photon flux ufanisi kanye nesilinganiso esifanele se-red-blue ratio ingahlangabezana nesidingo sokukhula kwezitshalo.
IShineOn izibophezele ekwakhiweni kwemithombo yokukhanyisa esezingeni eliphakeme futhi inikezela ngesixazululo esiphelele sokugqugquzela nokusetshenziswa kwe-LED emkhakheni wezibani zokulima.